Inuu isku dayay inuu xaaska kala wareego, inuu sanka ka jebiyay iyo dhacdooyin fool xun oo uu Arda Turan kula kacay fannaan caan ah! - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Inuu isku dayay inuu xaaska kala wareego, inuu sanka ka jebiyay iyo dhacdooyin fool xun oo uu Arda Turan kula kacay fannaan caan ah!
Laacibka kooxda Başakşehir ee ka dhisan dalka Turkiga, isla markaasna amaahda kaga maqan Barcelona ayaa dagaal iyo qalalaaso ka sameeyay magaalada Istanbul meel ka mid ah, isagoo sanka ka jebiyay fannaan caanka ah dalka Turkiga.
Sida laga soo xiganayo warbaahinta dalka Turkiga, dagaalka ayaa ka billaawday ka dib makii uu usoo dhowaaday xaaska fannaanka lagu magacaabo Berkay.
In yar ka dib, Berkay ayaa si fool-ka-fool ah usoo hor istaagay Arda, waxaana halkaas ka abuurmay dagaal toos ah.
Ciyaaryahankii hore ee Atletico Madrid ayaa durba sanka ka jebiyay fannaanka, taasoo dhalisay in si deg deg ah isbitaalka loo geeyo.
Dagaalka halkaas kuma uusan ekaanin e, Arda ayaa isbitaalka kaga daba tagay Berkay, waxaana uu dib ugu dhowaaday xaaskii fannaanka, isagoo weydiistay inay disho ninka, si noloshiisa ay usoo gabagabeyso, sida ay qorayaan qaar ka mid ah wargeysyada kasoo baxa Istanbul.
Si kastaba ha ahaatee, Arda ayaa si dhaqso ah u dafiray inay dhacdadaas jirto oo uu isbitaalka tagay, balse waxa uu qiray inuu dhacay dagaal.